१० गल्ती जसले तपाईंलाई जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ ! – Krazy NepaL
१० गल्ती जसले तपाईंलाई जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ !
May 27, 2021 1172
लगातार त’नाव बढ्ने गर्यो भने हाम्रो शरीरमा त्यस्ता हर्मोनहरु उत्पादन हुन्छन् जसले स्वास्थ्यलाई हा’नि पुर्याउँछ र तना’व बढाउँछ । यसका कारणले हाम्रो छालामा समयभन्दा पहिले नै चाउरीपना आउन थाल्छ ।
बिहान खाजा नखाने
बिहानको खाजा नखाने मानिसलाई दिनभरि थकान महसुस हुन्छ । यसले शरीरमा विभिन्न रोग पैदा गराउँछ अनि समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
लगातार एकै स्थानमा बसिरहनाले खाना राम्रोसँग नपच्ने सम’स्या हुन्छ । पाचन प्रणालीमा सम’स्या आउने भएपछि मोटोपना देखा पर्छ । यस्तोमा हाम्रो शरीर चाँडै रोगले ग्र’सित हुन्छ अनि हामी छट्टै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
पानी कम पिउने
दिनभरिमा ७ देखि ८ गिलास भन्दा कम पानी पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुन्छ जसले छालामा सुख्खापना बढाउँछ । छाला सुख्ख हुँदा चाउरीपनाको सम’स्या देखा पर्छ ।
मदि’रा, गाँ’जा, चुरोट र ड्र’ग्स जस्ता न’शाको लत लागेका मानिसको शरीरमा कार्टिसोल नामक ह’र्मोन बन्न थाल्छन् । यसले तनाव बढाउँछ र समयभन्दा पहिले नै मािनस बूढो देखिन थाल्छ ।
एकैसाथ धेरै काम गर्ने
एकैसाथ धेरै काम गर्दा हाम्रो धेरै ऊर्जा सकिन जान्छ । यसका साथै यसले कामको चापलाई बढाउँछ र त’नाव हुन थाल्छ । यसका कारणले दिमाग र हृदयमा नराम्रो असर पर्छ ।
निद्रा पूरा नलिने
अनुसन्धानले यो पुष्टी गरिसक्यो कि रातिको समयमा ७ घन्टा सुतेन भने यसले त’नाव, हृदय सम्बन्धी रो’ग र र’क्तचापमा सम’स्या पैदा गराउँछ । यस्तो गल्तीले जवानीमै मानिसलाई बूढो बनाइदिन्छ ।
पोषणयुक्त खानाको कमी
हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त पोषण दिने दूध, पनिर, हरियो सागसब्जी, अन्डा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा अत्यन्तै आवश्यक छन् । दैनिक खाने कुराहरुमा यी खानेकुरा पनि सेवन गर्नुपर्छ । किनकी जरुरी पोषण नपाउँदा शरीर चाँडै कमजोर भएर बूढो देखिन थाल्छ ।
सनस्क्रीन नलगाउनाले घामका किरण सिधै छालामा पर्न जान्छन् यसले छालाको रङ बदलिदिन्छ र नरमतालाई कम गराउँछ । छालासम्बन्धी समस्याबाट बच्नका लागि सधैँ घाममा हिँड्नु अघि सनस्क्रीन लगाउनुपर्छ ।
नियमित बिहान व्यायाम नगर्ने मानिसको शरीर फिट र स्वस्थ हुन सक्दैन । यस्तोमा मोटोपना, कब्जि’यत, एसिडीटी जस्ता समस्या देखा पर्छन् जसले विभिन्न रो’गलाई निम्त्याउँछ । समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिनबाट बच्नका लागि व्यायाम अत्यावश्यक मानिन्छ ।
Prev३ दिनमा नै पुरानो दादलाई चैट पार्ने चमत्कारिक घरेलु औषधीको बारेमा पढ्नुहोस्
Nextभ्यास्लिनमा केवल यो २ चिज मिसाएर कपालमा लगाउनुहोस्, हप्तामै देख्नुहुनेछ चमत्कार
नेपालमा टिभीएस कम्पनीले एकैपटक १२ वटा नयाँ शोरुम खोल्यो
यी ४ राशीलाई कहिलै छोड्दिनन् लक्ष्मीले साथ
दुब्लो व्यक्तिमा हुनसक्छ यस्तो रोग, कसरी मोटाउने ?
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (42761)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15027)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13074)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (12446)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (11827)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (11757)
२०७८ सालमा चम्किरहेको छ यो ६ राशिको भाग्य !